Himalaya Dainik » प्रेमीका भेट्न गएका युवाले उर्लिएको खोला तर्न खोज्दा…
प्रेमीका भेट्न गएका युवाले उर्लिएको खोला तर्न खोज्दा…
मोरङको रतुवामाई नगरपालिका-७ डाँगीटोलका २४ वर्षीय अरुण ऋषिदेव आइतबार आफ्नी प्रेमीकालाई भेट्न झापाको गौरीगञ्ज जाँदै थिए । प्रेमीकाले भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि मामा बासु ऋषिदेवलाई साथमै लिएर उनी घरबाट आइतबार साँझतिर निस्किए ।
प्रहरीकाअनुसार घुमेर जान निक्कै समय लाग्ने भएकाले अरुण र बासुले बाढीका कारण उर्लिएको रतुवा खोला तरेर जाने निर्णय गरे । खोला तर्नका लागि वरपर कुनै पुल वा अरु केही माध्यम नभएपछि उनीहरुसँग पौडिएर खोला तर्नुको विकल्प थिएन ।
पौडिएर तर्ने योजना बनाएका दुवैजना खोलामा हाम फा ले । जसोतसो पौडिएर खोला तर्दै बासु गौरीगञ्ज निस्कन सफल भए । तर उनीसँगै खोलामा हाम फा लेका भान्जा अरुण भने निस्किएनन् ।
खोला तरेर बाँ च्न सफल भएका मामाले भान्जालाई प्रेमीकाले भेट्न बोलाएपछि आफूहरु गौरीगञ्जतर्फ लागेको जानकारी दिएको रायमाझीको भनाइ
उनलाई खोलाले बगाएर बे पत्ता बनायो । आफन्त, स्थानीय बासिन्दा, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले खोजी जारी राखे पनि उनलाई फेला पार्न सकेका छैनन् । खोलाले बगाएको लामो समय भइसकेकाले जीवितै भेट्ने सम्भावना सकिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाका प्रहरी निरीक्षक मोहन रायमाझीले प्रेमीका भेट्न निक्‍कै ठूलो जोखिम मोलेका अरुणलाई रतुवा खोलाले बगाएर बेप त्ता बनाएको बताए । खोला तरेर बाँ च्न सफल भएका मामाले भान्जालाई प्रेमीकाले भेट्न बोलाएपछि आफूहरु गौरीगञ्जतर्फ लागेको जानकारी दिएको रायमाझीको भनाइ छ । उनकाअनुसार मामा बासुले गौरीगञ्ज पुगेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि मात्रै घटनाका बारेमा थाहा भएको थियो ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गौरीगञ्ज-विराटनगर सडक खण्डको निर्माणाधिन पुलदेखि करिब दुई सय मिटर दक्षिणबाट अरुणलाई खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीकाअनुसार निर्माणाधिन अवस्थाको पुलबाट जान सम्भव थिएन ।
‘वर्खाका बेला बाढी आएर खोलानाला उर्लिएका छन् । ज्या नलाई जोखिममा राखेर लाप रबाहीपूर्ण तरिकाले यसरी जोकोहीले पनि खोला तर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु समय लागे पनि सुरक्षित बाटो खोज्नुपर्छ । त्यसो गरिएमा ज्यान ब च्छ र कुनै क्षति हुन पाउँदैन ।’
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोश खड्काले प्रेमीकालाई भेट्ने नाममा जोखिमपूर्ण र लापरबाहीपूर्ण तरिकाले खोला तर्न खोज्दा घटना भएको बताए । ‘वर्खाका बेला बाढी आएर खोलानाला उर्लिएका छन् । ज्या नलाई जोखिममा राखेर लापरबाहीपूर्ण तरिकाले यसरी जोकोहीले पनि खोला तर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु समय लागे पनि सुरक्षित बाटो खोज्नुपर्छ । त्यसो गरिएमा ज्यान बच्छ र कुनै क्षति हुन पाउँदैन ।’
एसपी खड्काले वर्खाको समयमा सावधानी अपनाउँदै सुरक्षित बाटोको खोजी गरेर खोलानदी तर्न सबैमा आग्रह गरे । ‘अरुणले पनि गौरीगञ्ज पुग्न सुरक्षित बाटो अपनाएको भए ज्यान ब च्ने थियो,’ उनले भने, ‘चाँडो गरेर पुग्न खोज्दा ठूलो दु र्घटना हुन पुग्यो ।’
उनले कतिपय मानिसहरुलाई यसरीनै लाप रबाहीपूर्ण तरिकाले खोलानदी तर्न खोज्दा बाढीले बगाएको जानकारी दिए । यस घट नापछि कोही कसैलाई पनि तर्न नदिन खोला आसपासमा निगरानी बढाइएको एसपी खड्काको भनाइ छ । (अन्नपूर्ण पाेस्टमा किशोर बुढाथोकीले लेखेका हुन् ।)
यी हुन् धेरै पढेका १० हिराे, कुनले कति पढेका छन् ?
संसारकै सबैभन्दा पिरो खुर्सानी खाएर यी युवकले राखे विश्व रेकर्ड (भिडियो)
यी ५ किसिमका रोगीले भुलेर पनि नखानुस् लसुन, गर्नसक्छ खतरनाक असर
यी ५ राशिका लागि असाध्यै फलिफाप छ यो हप्ता
श्रीमान बितेको दुई महिनामा छोरी गुमाइन् !
टिकटकमा भाइरल बन्न लगाइन् आफ्नै घाँटीमा पासो, झुुक्किएर स्टुल खस्दा गयो ज्यान
बैतडीमा विद्यालय पोसाकमै किशोरीको ‘शव’ फेला